kala duwanaanshaha ciyaarta turubka Balaagjaaga Soomaaliya | bogga ciyaarta turubka Balaagjaaga77
Ugu Weyn Ee	/ Isbadalka
kala duwanaanshaha Ciyaarta turubka Balaagjaaga
Ciyaartoy badan ayaa weli jecel Blackjack Classic
Xidigga madow ee kubadda cagta ayaa wali ah calaamada ugu caansan ciyaartoyda. Classicjarka fudud waa sahlan tahay inaad soo qaadatid oo aad ciyaarta ku ciyaarto wakhti kasta oo aad dareemaysid. Hadafku waa in la gaaro qiimaha 21 ama ku dhawaad 21 marka loo eego ganacsadaha aad ku tartameyso.
Miyaad Sameyn kartaa Labo Wanaagsan?
Maqal-xayiraad Isku-dhafan oo kala-duwan, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah in lagu daro biil dheeraad ah haddii kiis lagaa jaray bilawgii. Si aad u sameysid shaashad madadaalo ah, waxaad kaloo u baahan tahay inaad sameysato shey caadi ah. Iyadoo ku xiran miiska, tiro ciyaartoy oo kala duwan ayaa ka dhigi kara labada isqabqabsi ee ugu fiican gacanta.
Gacan-siinta Horumarinta ee Weyn Gaar
Xeerarka sharraxaadda xun ee khariidada ah waxay la mid yihiin kuwa kala duwan. Farqiga ayaa ah in aad ku dari karto garab si aad u tartanto jackpot-kobcin ah.
Ciyaarta kubada cagta ee midigta ama pontoon waxay la mid tahay madadaalinta laakiin waxay leedahay shuruudo iyo faahfaahin kala duwan. Kaararka ganacsatada labadoodaba waxay ku sii jeedaan ciyaarta kubadda laydinka, xitaa haddii aad ciyaareysid pontoon online.
Blackjack Switch waa qayb ka mid ah ciyaarta oo ku dhex jirtay muddo tobanaan sano ah. In casinos gawaarida gawaarida, waxaad ku ciyaari kartaa laba gacmood halkii mid ka mid ah. Ciyaarta kaadhka furaha ah waxay kaloo kuu ogolaaneysaa inaad beddesho kaararka ugu sarreeya ee gacmahaaga. Waxaad la kulmi doontaa isla xeerarka haddii aad isku daydo inaad gashato qalabka casjeerka badan ee madadaalada Las Vegas casinos.
Haddii aad rabto inaad ciyaarto 21 shaashado, maxaad u tijaabineysaa 21 nooc ee superfun? Isbeddelkani wuxuu la ciyaarayaa hal gees. Tilmaamayaasha ugu weyn ee madadaalo leh 21 waa inaad si toos ah ugu qalantaa guusha haddii aad haysato ugu yaraan lix kaar oo gacantaada ah iyo qiimaha guud ee 20.
Mashruuca 21 madadaalo ah wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa inuu kala qaybiyo ilaa afar jeer, waana midka kaliya ee macaamiishaadu ka fiican tahay ganacsadaha.